အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): အန်တီလေး
ကျနော်က မိဘများရှိသော်ငြားလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အန်တီလေးရဲ့ လက်ပေါ်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာ။ စားလည်းအတူတူ အိပ်လည်းအတူတူ သွားလည်းအတူတူပဲ။ ကျနော်နဲ့ အန်တီလေးက အသက် ၁၀ နှစ်ကျော်ကွာပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့ နှစ်ဦးကြားမှာ မောင်နှမလိုလို သူငယ်ချင်းလိုလို နေထိုင်ခဲ့ကြတာလေ။ ကျနော်ဆိုးချင် ချွဲချင်ရင် အန်တီလေးရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းတိုးလိုက် အန်တီလေးပေါင်ပေါ်မှာ ခေါင်းတင်ပြီး အိပ်လိုက်နဲ့ ကျနော်လိုချင်သမျှကိုဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ရအောင်တောင်းခဲ့တာ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော် ၁၄-၁၅ နှစ်ရောက်လို့ လူပျိုဖြစ်လာခဲ့တော့ အန်တီလေးက ကျနော်ကို ရှောင်ဖယ်ဖယ်ဖြစ်လာတော့တယ်။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ ကျနော်မုန့်ဖိုးလိုချင်လို့ အန်တီလေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းတိုးဝင်လို့ ချွဲနေမိတယ်၊ အန်တီလေးကလည်း ကျနော်ခေါင်းကို လက်နဲ့ပွေ့ထားပေးတော့ ကျနော်ရဲ့ မျက်နှာက အန်တီလေးရဲ့ ရင်သားနဲ့ ကပ်ရပ်ပဲပေါ့။ အန်တီလေးက အဝတ်အစားတွေ အပြည့်ဝတ်ထားလေတော့ ကျနော်မျက်နှာက ရင်သားဖုဖုဖောင်းဖောင်းကိုပဲ ဖိမိနေတော့တယ်။ ကျနော်ကလည်း အငြိမ်မနေတော့ အန်တီလေးရဲ့ ရင်သားကို ဖိပြီး ပွတ်မိနေသလို ဖြစ်နေပြီး ကျနော်ကို ပွေ့ကိုင်ပေးထားတဲ့ အန်တီလေးရဲ့ လက်ချောင်းတွေက ကျနော်လက်မောင်းကို ပွတ်နေတာတော့ သတိထားမိလာတယ်လေ။ ကျနော်ကလည်း လူပျိုဖြစ်ခါစဆိုတော့ ကျနော်ရဲ့ ပုဆိုးကြားမှာလည်း မာကျောတောင့်တင်းလာတာကို ခံစားမိလိုက်တာပေါ့။ အဲဒီလို ကျနော်ရဲ့ လိင်တံတောင့်တင်းပြီး ထောင်မတ်နေတာကို အန်တီလေးလည်း မြင်သွားပြီး လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်၊ ပြီးတော့ "လူဆိုးလေး သွား မုန့်ဖိုးပေးမယ် ထတော့" လို့ ပြောပြီး အန်တီလေးလည်း ကျနော်အနားက ထထွက်သွားလေရော။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကစလို့ အန်တီလေးလည်း ကျနော်ကို အနားကို သိပ်အကပ်မခံတော့ဘူး။ ပွတ်သီးပွတ်သတ်အနေမခံတော့တာ။ အဲဒီအချိန်ကစလို့ နှစ်ယောက်အတူတူ အိပ်ခဲ့ကြရတဲ့ ကုတင်ကနေ ကျနော်အတွက် အန်တီလေးရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ သီးခြားကုတင်နဲ့ အိပ်လာရတော့တယ်။ ပထမဦးဆုံး သီးခြားစအိပ်ရတဲ့ညက ကျနော် အတော်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အန်တီလေးနဲ့ ကျနော် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သီးခြားဖြစ်လာခဲ့ရသလို ခံစားနေရတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း အန်တီလေးကို ကြည့်နေရင်း အိပ်ပျော်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သီးခြားခွဲအိပ်လို့ ၄ ရက်အကြာမှာ ကျနော်ဟာ အပြင်းအထန်နေမကောင်း ဖြစ်ပါလေရော။ ဖေဖေ မေမေတို့က ကျနော်ကို ဂရုစိုက်ပေးပေမယ့် ညဖက်ရောက်ရင် ကျနော်အန်တီလေးနဲ့အတူ ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ အန်တီလေးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ အိပ်ချင်နေခဲ့တာလေ။ ကျနော်ကိုယ်ပူတွေအရမ်းတက်လို့ ၂ ညမြောက်မှာ ကျနော်အန်တီလေးရဲ့ရင်ခွင်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ပြန်အိပ်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီနောက်မှာ ကျနော် ကိုယ်ပူတွေကျလာပြီး နေကောင်းလာတော့လေ။
အန်တီလေးလည်း ကျနော်ကို သီးခြားပြန်မအိပ်ခိုင်းတော့ပါဘူး၊ သူနဲ့အတူ ကျနော်ကို ပြန်အိပ်ခွင့်ပေးလာတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပဲ အံ့သြသွားပြီး အန်တီလေးကိုမေးမိခဲ့ရတာပေါ့။ ကျနော် အတော်ကိုနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့နေတုန်းက ယောင်ရမ်းပြီး ပြောခဲ့တာတွေ၊ ငိုနေခဲ့တာတွေကြောင့် အတူပြန်အိပ်ခွင့်ပေးတာလို့ အန်တီလေးက ပြန်ပြောပြတယ်လေ။ အန်တီလေးနဲ့ အတူအိပ်ချင်တယ်လို့ ကျနော်ပြောရင်း ငိုနေခဲ့တယ်လို့ အန်တီလေးက ပြန်ပြောပြနေတာပေါ့။ ကျနော်လည်းနေပြန်ကောင်းလာပြီး အန်တီလေးနဲ့ အရင်လိုပဲ ပွတ်သီးပွတ်သတ်နေခွင့်ရလာပြန်တော့တယ်။ ညဖက်တွေဆို အန်တီလေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကြားမှာ မျက်နှာအပ်ပြီး အိပ်လိုက်၊ အန်တီလေးရဲ့ နောက်ကျောကနေ အန်တီလေးရဲ့ ဖင်ကိုခွအိပ်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွင်နေရတော့တာ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဒီလိုနီးနီးကပ်ကပ်နေရင်းနဲ့ ကျနော်ရဲ့ လိင်စိတ်တွေလည်း နိုးကြားလာသလို ခံစားလာရတော့တာလေ။ ကျနော်ရဲ့ တောင့်တင်းနေတဲ့ လိင်တံဟာ အန်တီလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုအောင်ပိုင်းကို အကြိမ်တော်တော်များများ ထိတွေ့နေတတ်ခဲ့ပြီ။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒီလိုထိတွေ့နေရတာတွေကို သက်ပျင်းချသံကလွဲလို့ အန်တီလေးက ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး၊ အိပ်ရာလည်း ခွဲပြီး မအိပ်ခိုင်းတော့ဘူးပေါ့။ ပြောရလျှင်တော့ ငယ်ငယ်လေးတည်းက အန်တီလေးရဲ့ ခန္ဓာကို အပေါ်ပိုင်းကို အဝတ်အစားမပါပဲ မကြာခဏတွေ့ဖူးခဲ့တယ်လေ။ အိပ်ခန်းထဲမှာ အဝတ်အစားတွေလဲဝတ်တိုင်း မြင်ခဲ့ရတာပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီမြင်ကွင်းတွေကို မျက်စိထဲမှာ ပြန်မြင်ယောင်တတ်လာပြီး လိင်တံတွေလည်း တောင့်တင်းလာတတ်ခဲ့ရပြီ။ ဒါတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ကျနော်လည်း ကိုယ်တိုင် စိတ်ဖြေတဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကို အန်တီလေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကိုမှန်းရင်း လုပ်တတ်လာခဲ့ရပြီ။ ညဖက် အတူအိပ်ရင်လည်း အန်တီလေးရဲ့ ဖင်ကြားကို ကျနော်လိင်တံမာမာက ထိုးလို့ အိပ်တတ်လာခဲ့ပြီ။ ကျနော်ရဲ့လက်တွေကလည်း အန်တီလေးရဲ့ ရင်သားတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ အိပ်ပျော်တတ်လာခဲ့ရပြီပေါ့။
xxxxxxxx ဆက်ရန် xxxxxxxxx
Posted by bluegyi at 04:29
shwesetharlay 8 June 2013 at 05:48
ကို bluegyi ရေ ဇာတ်လမ်း အသစ် လေးတွေ တင် ပါဦး ကျွန်တော်က ကိုဘလူး ရဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ပါ
ဆက်ပြီးအားပေး နေပါ့ မယ်
thura kyaw 18 July 2013 at 07:39
အချစ်နယ်ကျွံ အန်တီလေး ဆက်ပါဦး
chitmayar 1500 29 May 2016 at 11:26
Nay Myo 20 July 2013 at 20:03
naing mintun5August 2013 at 19:56
jo ker 11 August 2013 at 08:42
Kyaw 17 August 2013 at 18:04
sat par woo ja half feel phite kon p
Kyaw 17 August 2013 at 18:05
myan2 lay tin pay par naw
zawgyi 27 August 2013 at 01:03
ရှင်းသန့် 27 August 2013 at 06:29
blue 18 September 2013 at 10:37
မျိုးဟန်ထွန်း 24 September 2013 at 23:50
အ ခြောက်နဲ့ ဖာသယ်မသားတွေ
Anonymous7October 2013 at 07:37
visit my blog sexo amateur
Anonymous 15 October 2013 at 07:23
Me encanta este blog, saludos desde LOS MEJORES CULOS XXX DE LA WEB
Aung Win 13 January 2014 at 19:36
Min Thu Thu wana 21 July 2014 at 19:10
လီးဖြစ်လို့ ဆက်မရေးတာလား ဟ
Swaggerz Wai Hlyan 29 October 2014 at 11:41
Amazing! http://clashofclanshelper.com/ - I got free Clash of Clans gems here! Get yous too in less than two minutes!! Recommended!(ZgOue71bfj)
Tun Tun 11 April 2015 at 20:54
Phyo Lay4March 2016 at 09:07
Unknown3October 2017 at 13:23